Wararka Maanta: Khamiis, May 21, 2020-Dagaallo ka dhacay South Sudan oo ay 300 oo ruux ku dhinteen muddo isbuuc ah
Dagaalka ayaa ka dhacay Gobolka ku yaalla bariga waddankaasi ee Jonglei state
Mid kamid ah Odoyaasha deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dirirtu ay bilaabatay maalintii Sabtida ee aynu soo dhaafnay, waxayna maleeshiyada Murle ay gubeen tuulooyin badan oo ku yaalla Maamulka Uror, ka hor inta aaney colaaddu sii baahin.
Shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in dadka dhaawac ahaan loogu keenay ay qaarkood ka muuqanayaan rasaas lala dhacay, waxaana qaar kamid ah dhaawacyada diyaarad loogusoo qaaday magaalada Juba si loogu daaweeyo.
Howl-galka Qaramada Midoobe ee Suudaanta Koonfureed ayaa askar nabad ilaaliyayaal ah u daad gureysay goobaha lagu dagaallamay si xaaladda loo dejiyo. Dad badan oo jecel in ay ku laabtaan guryahooda waxay qabaan cabsi ballaaran oo ku aaddan in la wax-yeelleeyo.
Dowladdu waxay sheegtay in qiyaastii 800 oo ruux ay ku dhinteen dagaalladaan beelaha u dhexeeye kuwaas oo bilowday bishii labaad ee sanadkaan
Dalka Koonfurta Suudaan ayaa ka kabanayay colaado sokeeye oo muddo ka taagnaa, waxayna dagaallada beelaha yihiin kuwa xaaladda ugasii daraya.